Firongatry ny valanaretina Covid-19: miverina misokatra mandray marary ny Village Voara | NewsMada
Firongatry ny valanaretina Covid-19: miverina misokatra mandray marary ny Village Voara
Ho fandraisana an-tanana ireo mararin’ny Covid-19 izay mihabetsaka ankehitriny, hosokafana indray ny eny amin’ny Village Voara. Ho hentitra ny fampanarahana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra hifehezana ny aretina.
Nanao fanambarana ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny talata teo, fa tsy mitsaha-mitombo ny olona mararin’ny Covid-19 eto Madagasikara. Vokatr’izany, miverina misokatra ny CRC19 etsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka. Handray ireo marary sy hanao fitiliana ireo ahitana soratr’aretina ireo ekipan’ny mpiasan’ny fahasalamana handray an-tanana eny amin’izany toerana izany.
Maimaimpoana avokoa ny fitsaboana rehetra mahakasika ny Covid-19. Araka ny fandaminana napetraky ny minisitera, ampidirina hopitaly avy hatrany ireo marary ka voamarina fa misy otrikaretina Coronavirus. Voakasik’izany ireo izay misy tsimokaretina ary manana aretina mitaiza toy ny diabeta sy ny fiakaran’ny tosidra izay mitarika amin’ny tranga misy fahasarotana.
Manaraka ny fitsaboana any an-trano ary mihiboka tanteraka ireo olona nanaovana fitiliana ary hita fa mitondra ny tsimokaretina Coronavirus kanefa tsy misy soratr’aretina. Tsy mahazo mihitsy mivoaka ny trano raha tsy tapitra ny fepetra ary hita fa tena sitrana tsy mamindra intsony.
Misy ny taratasy fanekena ataon’ilay olona fa hanaja ny fihibohana mba tsy ho fahavalon’ny hafa ka hamindra amin’ny manodidina.
Faritra 14 ny ahitana ny valanaretina ankehitriny. Faritra efatra kosa no tena ahitana betsaka toa an’Analamanga, i Boeny, i Vatovavy Fitovinany ary i Matsiatra Ambony. Mahakasika ny saranga rehetra ny aretina ary tsy misy salan-taona avahina fa mahazo ny rehetra.
Ho an’ireo faritra telo: Analamanga, i Vatovavy Fitovinany ary i Matsiatra Ambony, hovatsina fanafody ny CSB ahafahana mitsabo avy hatrany raha misy ny valanaretina amin’ireo toerana tena ahitana izany.
Anisan’ny antony nampirongatra ny aretina ny tsy fanarahana ireo fepetra sakana sy ireo fitsipika izay manan-kery sy tokony hotohizana mandrakariva ary hamafisina mihitsy.
Hanao izay ho afany ny mpiasan’ny fahasalamana
“Miankina amin’ny fanajantsika ireo fepetra sakana no tsy hidirantsika amin’ny fihibohana”, hoy ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka.
Anisan’izany ny fampiasana mandrakariva ny arovava orona isaky ny mivoaka ny trano, ny fanajana ny elanelana 1 m sy ny fanasana tanana matetika amin’ny savony.
Ireo tompon’andraikitra rehetra, tsy maintsy hampihatra ny sazy amin’ny tsy fandraisana fepetra mety hataon’ny olona.
Nanome toky ny minisitra fa tsy hikely soroka ny mpiasan’ny fahasalamana rehetra ary vonona handrindra araka izay tratra ny ady amin’ny Coronavirus miverina mamely indray ankehitriny.